Dhimma Ajjeechaa Gammachuu Gaaromsaa 02 - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosDhimma Ajjeechaa Gammachuu Gaaromsaa 02
Mootummaan amma jiru, mootummaa Habashaa Afaan Oromoo dubbatu; akeekni isaanii, madda sabboonummaa Oromoo kanneen ta’an dhaloota Qubee lafa irraa fixuun, sabboonummaa Oromoo balleessuudha; sabboonummaa Habashaas yeroo dheeraa keessatti deebisanii gad-dhaabuu dha. Dhumaatiin amma argaa jirru kun mallattoo xiqqoo dha; lkan dhufuuf jiru, kan kana caalu waan ta’eef, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, WBO fi ummanni Oromoo harka walqabatanii diina Oromoo ofirraa ittisuu fi kaasuu qaban. Bilisummaan Oromoo dhugoomu amlee, Oromoo fi Oromiyaan nagaa hin argatan!!
OROMOON dubbii FINFINNEE qofa irratti tokkummaan falmee, Gaafa wallagga, Gaafa Gujii, gaafa DIRREEDHAWAA kan calisuu taanaan dhuguma Ammas tokkuummaan hin jiru
Maddi rakkoo Dirree Dhawaa poolisii magaalattiti.